Ku tax liiska ganacsigaaga Xariirka Ganacsiga Bing | Martech Zone
Ku tax liiska ganacsigaaga Xariirka Ganacsiga Bing
Tan iyo markii ay Google waxay leedahay suuq badan oo raadinta ah, waxaan u muuqanaa inaan xoogaa saarinno xoogaa yar. Si kastaba ha noqotee, Bing ayaa si tartiib tartiib ah u qabsanaysay saamiga suuqa waxayna la soo baxday barnaamijyo aad u qurux badan oo ay ku jiraan Android iyo iPad Qaar ka mid ah astaamaha barnaamijyadaas iyo barta Bing lafteeda aad ayey u fiicnaayeen inaan daawannay Google amaahda oo ay kor ugu qaadaan mashiinkooda raadinta qaab isku mid ah.
Khariidaynta Bing waa wax aad u fiican oo caan ku sii kordheysa. Bing ayaa bilaabay Xariirka Ganacsiga Bing ganacsiyada inay diiwaangeliyaan ganacsigooda waana mid aad u xoogan.
Waxaan wax ka qoray muhiimadda ay leedahay raadinta maxalliga ah iyo iska diiwaangelinta adeegga ganacsiga Google. Bixinta Bing sidoo kale waafiican tahay, waxayna leedahay dhowr siyaado ah oo dheeri ah - sida aragtida mobilada iyo Codadka QR. Makhaayadaha iyo baararka xitaa way awoodaan xiriiri ama ku dar menuskooda.
Maaddaama iska diiwaangelinta Xariirka Ganacsi ee Bing uu yahay mid bilaash ah, waa wax aan caqli-gal ahayn ganacsiyada inay dalbadaan liistadooda oo ay kor u qaadaan meheraddooda ganacsi ee internetka. Diiwaangelintu way fududahay oo waxaan kaarka boostada ku helay lambar PIN ah dhowr toddobaad gudahood. Waxaan markaa awooday inaan soo galo, ku daro calaamadeena ganacsigeenna, oo aan buuxiyo dhammaan macluumaadka bogga muhiimka ah si aan u daabacno ganacsigeenna. Dulqaad yeelo - liistadaadu isla markiiba kama muuqan doonto natiijooyinka raadinta.
Tags: AOLafuuha moogaanBulshada Caalamka ee Hal-abuurka Suuq-geynta Dijital ahwaxqabadkafaa'iido
Ugu dambeyntiina, Saameynta ereyga
La Xiriirinta Saxeexa Emailkaaga ee WiseStamp